Digital Patrika – वनभातदेखि पिकनिकसम्म
तर, मलाई पिर छैन । बनभात खान जाने भनेपछि मलाई एक माना दुध बुबाले पानी नमिसाई दिने कुरामा ढुक्क थिएँ ।
दुध नलैजानेलाई बनभात खानै नलैजाने जस्तो घातक निर्णय झन्नै नभएको ।
यसमा तम्सने चै रामे हो ।
सकेसम्म पसलमा किन्न केही नपरोस् भन्ने मान्यता अनुसार अघि बढियो । तै पनि केही सीप नलाग्ने छाँट देखिएपछि प्रतिब्यक्ति रु. २० उठाउँने कुरा उप्कियो । २० रुपैयाँ पनि बाआमाले नदिने खतरा धेरैको थियो । सकेसम्म पैसा उठाउँने निर्णय नहोस् भन्ठान्नेहरुले पनि सतहमै उत्रिएर विरोध गरेनन ।
एउटा बाल विद्रोह गर्न हामीलाई कस्ले सक्ने ? ठाउँको बिषयमा व्यापक भए पनि, पानी, दाउरा धेरै हिसाबमा हाम्रो माख्लाबारी फईनल भयो । मलाई बुबाले पनि ‘बनभात खान जाने भए माख्लाबारी जानु’ भनेर भन्नु भएको थियो । सबै कुरा लेख्ने हो भने लेखी साध्ये नै छैन । २० रुपैयाँ बाउले नदिएपछि ईश्वरेले चोरेर कोदो बेच्न हिंडेको बेला हजुरबाले फेला पारेछन् । बिचरालाई त्यो रात गोठमा बाँधेर सिस्नुपानी लगाएछन् । ‘बनभात खान गईस् भने खुट्टा भाँचिदिन्छु’ भनेर बाऊले साफ थर्काएछन् ।
चिनी : आधा किलो, तेल : आधा लिटर, जिरा : एक पाउ,
ऊ विर्सिएछ भनेर पन्छन खोज्यो । प्रतिकेले ‘मुजी विदुरेलाई जिम्मा लगाएको काम कहिल्यैं राम्रो हुँदैन ।’ विदुरे पनि के कम ? ‘तँ जाँठाले ल्याएको भए पनि भैहाल्थ्यो नि !’ उ च्याठ्ठियो । सलाईको निहूँमा झण्डै हानाहानै पर्‍यो ।
अरु त अरु विक्रमेले समेत भागको खीर वुत्याउँन सकेन । धेर कोठा खीर सबैले घरमा लगे । जुठो नहालेको खीर पनि भोर्लाको पातमा पोको पारेर घरको लागि बाँडियो । स्वस्थानीमाथि शंका निमिट्यान्न भयो । नाच्दैगाउँदै घर अवतरण गरियो । हामीले बनभातमा पकाएको खीर ममीलाई चखाएँ । बुबाले चाख्ने रहर गर्नु भएन । हल्का खीसीको भाषा ममीले ‘आफैंले पकाएको त खुब मीठो भयो होला नि !’ तर, घोर ब्यङ्ग्य थियो । किनकि, दुधको क्षमताभन्दा बढी चामल परेर खीर जरखट्टो भएको थियो । सारमा एउटा वनभात बयान हो, यो ।
पछि धेरै वटा बनभोज गईयो, अहिले पिकनिक गईन्छ । अहिले बफे सिस्टममा क्याटरिङवालाले पकाएको पुलाउ र आयातित सभ्यताको मधुप्याला पिएर मदहोश होईन्छ । तर, त्यो बेलाको जस्तो उमङ्ग हुँदैन । रमाईलो अनुभूति हुदैन । एक पटक फेरि, त्यस्तै बनभात खाने रहर छ । सायद पूरा हुँदैन होला…